यी दुई टिमबीच सहकार्य भए चलचित्र क्षेत्रमा नै तहल्कै मच्चिने ! – Everest Dainik – News from Nepal
यी दुई टिमबीच सहकार्य भए चलचित्र क्षेत्रमा नै तहल्कै मच्चिने !
हाँस्य टेलिचलचित्र हुँदै चलचित्र निर्माणमा होमिएका दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको टिम शक्तिशाली बन्दै गएको छ ।
‘६ एकान ६’ हुँदै हाल प्रदर्शनरत चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ सम्म आइपुग्दा दीपक–दीपा क्याम्पका कुनै फिल्म फ्लप छैनन् । सबै फिल्मले कलेक्सनमा रेकर्ड बनाएका छन् ।
यो टिमसँग जोडिने जो कोहीको चाहना हुन्छ । अझ बढी कलाकारलाई । यतिबेला उक्त टिमसँग अहिलेका ‘हटकेक’ अनमोल केसी जोडिने सम्भावना रहेको चर्चा सुरु भएको छ । यस विषयमा अचेल दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको खबर छ । तीन वर्षदेखि लगातार ‘छक्का पञ्जा’ को सिरिज बनाउँदै आएका दीपक–दीपा अब नयाँ नाममा फिल्म बनाउँदै छन् ।
उक्त फिल्मको स्क्रिप्टको खाका समेत तयार भइसकेको छ । नेपाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार, सो फिल्ममा अनमोलसँग टिमअप हुने सम्भावना बढ्दो छ । यसको चाँजोपाँजो वितरक तथा निर्माता मनोज राठीले मिलाएका हुन् । उनले अनमोलको नयाँ प्रोजेक्ट ‘क्याप्टेन’ वितरण गर्दैछन् । ‘छक्का पञ्जा ३’ उनले नै वितरण गरेका हुन् ।
कमेडी फिल्म निर्माणमा स्थापित टिमसँग अनमोललाई जोड्न वितरक राठीले भित्री रुपमा प्रयासको पुल बान्दै लगेका छन् । उनले अनमोल र दीपकराजसँग छलफल समेत गरिसकेका छन् भने दुवै टिमअप गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । यो कुरा अनमोलका पिता भुवन केसी र दीपकराज स्वयमले स्विकार गरेका छन् ।
वितरक राठी भने दुई पक्षसँग कुरा भएपनि फाइनल भने नभएको बताउँछन् । ‘कुरामात्र भएको हो । यस विषयमा अहिले कुरा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । स्क्रिप्ट राम्रो आयो र दुई पक्षलाई मन पर्‍यो भने टिमअप हुनसक्छ’, उनले भने । स्रोतका अनुसार, फिल्ममा अनमोल र दीपकराजको भूमिका बराबर भएमात्र सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना छ ।
दीपक(दीपकले निर्माण गर्ने चलचित्र र अनमोल केसी आवद्ध भएका हरेक चलचित्र दर्शकमाझ व्यग्र प्रतिक्षामा रहने गर्दछ । एक शक्तिशाली टिम र एक ठूला स्टारबीच टिमअप भए यसले घरेलु बजारमा उथलपुथल ल्याउने पक्का छ । अब दुई पक्ष बीचको छलफलले सहकार्यको रुप लेला वा हल्लामै सीमित होला ? सबैका लागि चासो र कौतुहलताको विषय बनेको छ।